Ku Dhaqanka: Ujeeddo La Dhisay, SaaS, Qalabaynta Suuqgeynta Ku-saleysan Cloud | Martech Zone
Suuqgeynta casriga ahi waa suuqgeynta dhijitaalka ah. Baaxaddeeda ballaadhan waxay ku fidsan tahay xeeladaha dibedda iyo soo-galidda, jiilka hoggaaminta iyo istiraatiijiyadaha kobcinta, iyo kobcinta nolosha macaamiisha iyo barnaamijyada u-doodista. Si loo guuleysto, suuqleyda waxay u baahan yihiin xal suuq geyn dijitaal ah oo karti leh, dabacsan, la falgalikara nidaamyo iyo qalab kale, dareen leh, fududahay in la isticmaalo, waxtar leh oo qiimo jaban.
Intaa waxaa sii dheer, boqolkiiba 90 ganacsiyada adduunka oo dhan way yar yihiin; sidoo kale waa kooxohooda suuq geyn. Si kastaba ha noqotee, xalalka otomaatiga suuq-geynta ugu badan looma qorsheynin inay daboolaan baahiyaha ururada yar yar ama kooxaha suuq-geynta yaryar ee badanaa laga helo gudaha shirkadaha waaweyn. Shirkadaha adeegsada otomaatigga suuqgeynta waxay u arkaan 107% beddel wanaagsan hoggaaminta.
Guudmarka Xalka Suuqgeynta Sharciga-On
Act-On waxay bixisaa barnaamij-ahaan-adeeg ahaan, xal otomaatiga suuq-geynta suuq-galka ku saleysan dariiqa oo u oggolaanaya suuqleyda inay la macaamilaan iibsadayaasha guud ahaan nolosha macaamiisha. Barnaamijkeeda waxaa loo dhisay si loo siiyo shirkadaha yaryar iyo kuwa dhexdhexaadka ah dhammaan qiimaha nidaamka otomaatiga suuq geynta heerka ganacsiga, iyada oo aan la helin kakan iyo ilaha IT-ga ee sida caadiga ah looga baahan yahay.
Mashruuca 'Act-On' wuxuu u oggolaanayaa suuqleyda inay ka fuliyaan ololeyaal suuq-geyn casri ah shabakadda, moobiilka, emaylka, iyo bulshada. Waxaa ku jira awooda: suuq geynta e-maylka, raad raaca booqdayaasha degellada, bogagga degista iyo foomamka, dhibcaha hoggaaminta iyo kobcinta, daabacaadda bulshada iyo raadinteeda, barnaamijyo otomaatig ah, baaritaanka A / B, isdhexgalka CRM, maareynta webinar iyo waxyaabo kale.
Iyadoo la adeegsanayo Act-On, dadaalada suuq geynta ayaa lagu cabbiri karaa laguna wanaajin karaa iyadoo lagu saleynayo xogta adag halkii laga dareemi lahaa dareenka caloosha. Suuqleyda si fudud ayey u sameyn karaan:
Maaree oo hagaaji dhammaan heerarka khibrada macaamiisha;
Ku-qor kharashka suuqgeynta dakhliga;
La soco waxqabadka rajada laga bilaabo hawlgelinta bilowga ah iyo u beddelashada iibka xiran oo ku celi iibka;
Ka warbixi ololeyaasha, laga soo bilaabo heerar sare ilaa qoditaanno faahfaahsan.
Mashruuca 'Act-On' wuxuu si gaar ah gooni ugu taagan yahay isticmaalkiisa iyo sidoo kale taageeradiisa macmiil ee aan lala tartamin: dadka isticmaala caadi ahaan waxay wadaan oo ay wadaan ololahoodii ugu horreeyay maalmo gudahood (nidaamyada dhaxalka ah waxay qaadan karaan toddobaadyo ama bilo) waxayna helayaan taageero heersare ah (taleefan / emayl ) iyada oo aan lahayn kharash dheeraad ah.
Act-On sidoo kale waa mid gaar u ah awooddeeda inay wax ka qabato baahiyaha suuqleyda casriga ah iyadoo la jaanqaadaysa dhammaan heerarka safarka iibsadaha iyo awood u siinta suuqgeynta inay taabato dhammaan heerarka meertada nolosha macaamiisha (laga bilaabo wacyigelinta iyo helitaanka illaa sii-haynta macaamiisha iyo ballaarinta). Intaa waxaa sii dheer, waxay u oggolaaneysaa suuqleyda inay dhexgalaan codsiyada ugu fiican ee aaladaha aaladaha ay horay u isticmaaleen, sidaa darteed waxay leeyihiin dabacsanaan ay ku habeyn karaan xirmooyinka suuqgeynta si ay ugu haboonaadaan baahidooda ganacsi ee soo kordheysa.
Ku-daba-galidda Booqdaha Booqdaha Websaydhka
Taariikhda Xiriirka ee Act-On
Cilmi-baarista 'Act-On' waxay muujineysaa in barnaamijyada suuqgeynta ee loo habeeyay baahiyaha warshad ay soo saaraan natiijooyin aad uga sarreeya kuwa aan ahayn. Iyada oo taa laga duulayo, Act-On ayaa dhowaan ku dhawaaqday in la bilaabayo Solutions-ka Warshadaha ee loo yaqaan 'Act-On Solutions', oo loo habeeyay warshado kala duwan oo ay ka mid yihiin daryeelka caafimaadka, safarka, maaliyadda, waxsoosaarka iyo tafaariiqda, iyada oo ay inbadan soo socdaan Loogu talagalay in lagu gaarsiiyo hagaajinta ROI iyo dhaqsi si dhaqso ah otomaatiga suuqgeynta, Xallinta Waxsoosaarka Warshadaha:
Content - Moodellada warshadaha u gaarka ah ee emaylka, foomamka, iyo bogagga degista oo leh tusaalooyin ololeyaal badan oo si fudud loo soo dhoofsan karo / looga dhoofin karo koontooyinka;
barnaamijyada - Hawlaha shaqada ee otomaatiga ah ee horay loo dhisay si ay u taageeraan kobcinta tallaabooyinka iyo ololayaasha kaqeybgalka;
bartilmaameedyo - Helitaanka natiijooyinka waxqabadka isku-darka ee howlaha suuq-geynta ee warshado kala duwan.
Qaado Dalxiis Muuqaal ah oo ku saabsan Act-On
Kaqeybgalka Kaqeybgalka waa qalab warbixineed oo bixiya helitaanka waqtiga-dhabta ah ee falanqaynta ololaha suuq-geynta iyada oo loo marayo qaabab la dhoofin karo oo toos loo cusbooneysiin karo oo loogu talagalay waraaqaha Google iyo Microsoft Excel
In kasta oo suuq-geynta xogta lagu kaydiyo ay noqotay mid muhiim u ah ololayaasha maalmahan, maareynta xogta ayaa weli ah caqabad muhiim u ah inta badan suuqleyda B2B, sida lagu sheegay sahan dhowaan la sameeyay. Ka-qaybgalka Xogta ayaa sahleysa in la daawado, la dhoofiyo lana wadaago xogta, taas oo u oggolaanaysa suuqleyda inay horumariyaan oo ay hagaajiyaan ololahooda waxayna sidoo kale ka dhigeysaa xogta suuqgeynta inay u sahlanaato kooxaha kale ee ururka.
Iskuduwaha Suuqgeynta Dhaqannada ugu Fiican
74% shirkadaha qaata is-gaarsiinta suuqgeynta waxay u arkaan ROI wanaagsan 12 bilood ama ka yar. Shirkad kastaa waxay yeelan doontaa yoolal u gaar ah oo taageeraya hawlaheeda ganacsi ee u gaarka ah, laakiin waxaa jira qaabab wanaagsan oo wanaagsan oo kaa caawin kara sida ugu badan ee habka otomaatiga suuqgeynta:
Samee qaab-maamul maamul rasmi ah kaas oo sharxaya doorka iyo xiriirka ka dhexeeya lixdaan qalab ee muhiimka u ah suuq-geynta iyo geeddi-socodka: xogta, qorsheynta hoggaaminta, hagidda hoggaanka, u-qalmidda hoggaanka, kobcinta hoggaaminta, iyo cabbiraadda. Hubso in iibinta iyo suuqgeynta ay isku raacsan yihiin tallaabo kasta, oo aad u adeegsato isla luuqad si aad u sharaxdo.
Isku waafaji geedi socodka suuq geynta iyo yoolalka waaxda iibka. Macaamiisha ayaa galaya qolka iibka hadhow geedi socodka go'aanka sidii hore. Tani waa run labada shirkadood ee B2B iyo B2C. Tan macnaheedu waa suuqgeyn si fudud uguma dhiibi karto magacyada la xaqiijiyay waaxda iibka.
Maktabadda otomatiga suuqgeynta waa inuu ku jiraa waxyaabaha kaqeyb galaya iibsadaha waxbartay, ururkuna waa inuu noqdaa mid nugul oo kuxiran kara rajooyinka isla marka ay muujiyaan ujeedka inay iibsadaan.
Raadi xalalka otomaatiga suuqgeynta taas oo xoogga saareysa qalabka iyo awoodaha suuqleyda, halkii looga baahnaan lahaa shuruudaha IT-ga. Qalabaynta suuqgeynta waa inay hogaamiyaan xirfadlayaal suuqgeyn ah, maahan CIO.
Act-On waxay u adeegtaa in ka badan 3,000 oo shirkadood oo u dhexeysa cabirro laga bilaabo ganacsiyada yaryar iyo kuwa dhex-dhexaadka ah illaa waaxaha shirkadaha waaweyn, ee ku kala baahsan warshadaha kala duwan (sida adeegyada maaliyadeed, daryeelka caafimaadka, soo-saarka, softiweerka, waxbarashada iyo teknolojiyada). Macaamiisha hadda jira waxaa ka mid ah Xerox, Swarovski, Jaamacadda Ohio iyo ASPCA, iyadoo mid ka mid ah kiisaska adeegsiga ee ku kalifaya ay yihiin LEGO Education.
Suuqgeyaashu waxay ku jiraan cadaadis ka badan sidii hore si ay u gaarsiiyaan natiijooyinka dhammaan dhinacyada nolosha macaamiisha. Tiknoolajiyadeena ayaa awood u siineysa suuqleyda inay u adeegsadaan xogta si ay u wadaan go'aamada waxayna dib u qaabeynayaan sida ay magacyadu ula macaamilayaan iibsadayaasha. Natiijo ahaan, suuqleyda maanta waxay yihiin kuwo lala xisaabtamo oo wax ku ool ah, iyagoo si toos ah uga qayb qaata kobaca dakhliga iyo qanacsanaanta macaamiisha. Andy MacMillan, CEO, Act-On Software
Daraasadda Kiisaska otomaatiga ee Suuqgeynta - Sharciga-On
La shaqaynta barayaasha iyo maamulayaasha K-6 si loo horumariyo xalalka iyo ilaha loogu talagalay barashada fasalka wadajirka ah, LEGO Education waxay u weecisay qalabaynta suuq geynta kadib markay ogaatay xalka suuqgeynta iimaylkeedu uusan kor u qaadi karin kobaca shirkadda. Act-On ugu dhakhsaha badan wuxuu cadeeyay sida ugufiican ee baahiyaha gaarka ah ee LEGO, iyada oo ay ugu wacan tahay qiimaheeda jilicsan iyo awooda gooldhalinta hogaaminta adag, isla markaana si dhakhso leh loo shaqeeyay - isla markiina la siinayo aragti ku saabsan dhuumaha iibka ee LEGO Education iyo ka caawinta kooxda suuq geynta qaybta inay si fiican u kalahoreeyaan hogaaminta imaanaysa .
Iyadoo Act-On, LEGO Waxbarashadu waxay awood u yeelatay inay hawlgeliso 14 ololeyaal otomaatig ah sanadkiiba (oo ka duwan labadii barnaamij ee hore ee e-mailka ee hore), oo hadda waxay ku raaxeeysataa a 29 boqolkiiba heerka rajada-u-beddelashada.
Tags: imtixaanka abAct-Onsuuq-geyntaotomaatiga suuq geyntasoftware-ka ku shaqeeyasuuq geyn otomaatig ahotomaatiga suuqgeynta daruur ku saleysanisdhexgalka crmmaaraynta nolosha nolosha macaamiishaEmail Marketingfoomamkaboggaga soo degayahagaajinta barbaarintadhibcaha hogaankau gaar ahaanshaha suuqgeyntawarbixinta ololaha suuqgeyntaotomaatiga suuq-geynta dhexdhexaadka ahkobcintasuuq geynta omnichannelotomaatiga suuq geynta ganacsiga yaryarrajada bulshadadaabacaadda bulshadamaaraynta webinarraadinta booqdayaasha websaydhka
Zuora: Ottoeka Shaqada Biil-celintaada iyo Hawl-gelinta Rukunka